Isaziso Sezomthetho nemibandela yokusetshenziswa Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
1 Isaziso Sezomthetho kanye nemibandela yokusebenzisa
1.1 Inhloso yale webhusayithi
1.2 Ukusetshenziswa kwewebhu
1.3 Izibopho Zomsebenzisi
1.4 Ukuvikelwa Kwedatha Nenqubomgomo Yobumfihlo
1.5 Ukusetshenziswa kwamalungelo e-Arco
1.7 Amalungelo empahla yezimboni kanye nezimboni
1.8 Izixhumanisi Zangaphandle
1.9 Ukukhishwa kweziqinisekiso nesikweletu
1.10 Umthetho Osebenzayo Nokubusa
• Igama Corporate kuyinto: Online servicios Telemáticos SL
• I-CIF / NIF B19677095
• Ihhovisi elibhalisiwe likwiC / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - I-Albolote (Granada)
Ekusetshenzisweni kwe-web Discover.online uMsebenzisi uthembisa ukungafinyeleli ekuziphatheni okungalimaza isithombe, izintshisekelo kanye namalungelo wokuthola.online noma izinkampani zangaphandle noma ezingalimaza, zikhubaze noma zilayishe kakhulu ukutholwa kwewebhu. online noma okungavimba, nganoma iyiphi indlela, ukusetshenziswa kwewebhu okujwayelekile.
Discover.online yamukela izindlela ezanele zokuphepha ukuthola ubukhona bamagciwane. Kodwa-ke, uMsebenzisi kufanele azi ukuthi izindlela zokuphepha zezinhlelo zamakhompiyutha kwi-Intanethi azithembekile ngokuphelele nokuthi, ngenxa yalokho, ukutholakala ku-inthanethi akunakuqinisekisa ukungabikho kwamagciwane noma ezinye izinto ezingadala ushintsho ezinhlelweni zamakhompyutha. (i-software ne-hardware) yoMsebenzisi noma kumadokhumenti abo kagesi namafayela aqukethe kuwo.
• Gcina, ushicilele futhi / noma udlulise idatha, imibhalo, izithombe, amafayela, izixhumanisi, isoftware noma okunye okuqukethwe okungalungile ngokwezinhlinzeko zomthetho ezisebenzayo, noma ukuthi ngokwesilinganiso sokutholwa ku-inthanethi ngokuba okungekho emthethweni, okunobudlova, ukusongela, ukuhlukumeza, ukuhlambalaza, okuyihlazo, okunyanyekayo, okucwasa ngokwebala, okucasulayo noma okungathandeki noma okungekho emthethweni noma okungadala ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo, ikakhulukazi ezocansi.
Njengomsebenzisi, waziswa ukuthi ukufinyelela kule webhusayithi akusho ukuthi, nganoma iyiphi indlela, ukuqala kobudlelwano bezentengiselwano ne-Online servicios Telemáticos SL ngale ndlela, umsebenzisi uyavuma ukusebenzisa iwebhusayithi, izinsizakalo zayo nokuqukethwe ngaphandle kokuphula umthetho umthetho wamanje, ukholo oluhle nokuhleleka komphakathi. Ukusetshenziswa kwewebhusayithi ngezinhloso ezingekho emthethweni noma ezilimazayo akuvunyelwe, noma ukuthi, nganoma iyiphi indlela, kungadala ukulimaza noma kuphazamise ukusebenza okujwayelekile kwewebhusayithi.
I-Online servicios Telemáticos SL iqinisekisa ubumfihlo bemininingwane yomuntu enikezwe abakwa-USERS nokwelashwa kwabo ngokuya ngomthetho wamanje wokuvikelwa kwemininingwane yomuntu uqobo, sebemukele amazinga wokuphepha wokuvikela idatha yomuntu siqu edingeka ngokusemthethweni.
I-Online servicios Telemáticos SL izibophezele ekusebenziseni imininingwane efakwe kufayela elithi "Abasebenzisi be-WEB kanye ne-SUBSCRIBERS", ukuhlonipha imfihlo yabo futhi bayisebenzise ngokuhambisana nenjongo efanayo, kanye nokuhambisana nesibopho sabo sokugcina nokuvumelanisa konke izindlela zokuvikela ukuguqulwa, ukulahleka, ukuphathwa noma ukufinyelela okungagunyaziwe, ngokuya ngezinhlinzeko zeRoyal Decree 1720/2007 kaDisemba 21, evumela imigomo yokuthuthukiswa kwe-Organic Law 15/1999 ye-13. UDisemba, Ukuvikelwa Kwemininingwane Yakho.
Umsebenzisi angasebenzisa, maqondana nedatha eqoqiwe, amalungelo aqashelwa ku-Organic Law 15/1999, wokufinyelela, ukulungiswa noma ukukhanselwa kwedatha nokuphikiswa. Ukusebenzisa la malungelo, umsebenzisi kumele enze isicelo esibhaliwe futhi esisayiniwe angasithumela, kanye nefothokhophi ye-ID yabo noma idokhumende elilinganayo lobunikazi, ekhelini leposi le-Online Servicios Telemáticos SL (okungukuthi, iC / Blas de Otero no16 1º Iz. -18230 - I-Albolote (iGranada)) noma nge-imeyili, kunamathiselwe ikhophi ye-DNI ku: info (at) discover.online. Ngaphambi kwezinsuku eziyi-10, isicelo sizophendulwa ukuqinisekisa ukusetshenziswa kwelungelo ocele ukulisebenzisa.
I-Online servicios Telemáticos SL yazisa ukuthi kunezindlela zokufaka izikhalazo ezitholakala kubasebenzisi nakumakhasimende.
Umsebenzisi angenza izimangalo ngokucela ishidi lakhe lezimangalo noma ngokuthumela i-imeyili ku-info (at) Discover.online ekhombisa igama nesibongo sakho, insizakalo noma umkhiqizo othengiwe futhi usho izizathu zesicelo sakho.
Futhi ungaqondisa isimangalo sakho ngeposi ku: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - I-Albolote (iGranada) isebenzisa, uma ufisa, ifomu lesimangalo elilandelayo:
Ukuqashelwa: I-Online servicios Telemáticos SL
C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - I-Albolote (eGranada)
I-imeyili: info (at) Discover.online
Ngalezi Zimo Ezijwayelekile, akukho malungelo obuhlakani noma wezimboni anikezwa kuwebhu Discover.online enempahla yakhe yobuhlakani ingeye-Online servicios Telemáticos SL, ukukhiqizwa kabusha, ukuguqulwa, ukusatshalaliswa, ukuxhumana komphakathi, okwenza umphakathi uvinjelwe uMsebenzisi ngokusobala. , ukukhipha, ukusebenzisa kabusha, ukudlulisa noma ukusebenzisa noma imuphi uhlobo, nganoma yiziphi izindlela noma inqubo, yanoma iyiphi yazo, ngaphandle kwezimo lapho kuvunyelwe ngokomthetho noma kugunyazwe ngumnikazi wamalungelo ahambisanayo.
Esimweni lapho umsebenzisi noma umuntu wesithathu ebheka ukuthi kube nokuphulwa kwamalungelo abo okuqashelwa okusemthethweni ngokufakwa kokuqukethwe okuthile kwiWebhu, kufanele azise ngokusho kwe-Online servicios Telemáticos SL ekhombisa:
I-Online servicios Telemáticos SL yenqabisa noma yisiphi isibopho maqondana nemininingwane engaphandle kwale Webhu, ngoba ukusebenza kwezixhumanisi ezivelayo kungokwazisa uMsebenzisi ngobukhona beminye imithombo yolwazi ngesihloko esithile. I-Online servicios Telemáticos SL ikhululiwe kunoma yisiphi isibopho sokusebenza ngokufanele kwezixhumanisi ezinjalo, umphumela otholwe ngezixhumanisi ezishiwoyo, ubuqiniso kanye nokuba semthethweni kokuqukethwe noma imininingwane engatholwa, kanye nomonakalo ongaba khona Umsebenzisi ngenxa yolwazi olutholakala kwi-Web exhunyiwe.
I-Online servicios Telemáticos SL ayinikezeli noma yisiphi isiqinisekiso futhi ayifanelekile, nganoma isiphi isimo, ngomonakalo wanoma yiluphi uhlobo olungadala:
Ngokuvamile, ubudlelwane phakathi kokuthola online nabasebenzisi bemisebenzi yabo yocingo, abakhona kule webhusayithi, bangaphansi komthetho waseSpain kanye namandla kanye nasezinkantolo zaseGranada.
Esimweni lapho noma yimuphi uMsebenzisi enemibuzo mayelana nalesi saziso esisemthethweni noma noma yimiphi imibono ekuwebhusayithi Discover.online ungaya ku-info (at) Discover.online
Discover.online inelungelo lokushintsha, nganoma yisiphi isikhathi futhi ngaphandle kwesaziso sangaphambilini, isethulo nokuhlelwa kokutholwa kwewebhu.njengalesi saziso esingokomthetho.